Momba anay - Walter Electrical Equipment Co., Ltd.
Fanamboarana matihanina sy mpamolavola ny rafitra taranaka: Walter Eelectrical Equipment Co., Ltd.
Walter amin'ny famokarana setara mpamokatra gazoala, manana traikefa amin'ny famokarana manan-karena isika. Walter factory dia bulit tamin'ny 2003, manampahaizana manokana momba ny mpamokatra herinaratra napetraka nandritra ny 16 taona izahay. Walter dia mpiara-miasa amin'ny OEM an'ny Perkins, Cummins, Doosan, MTU, Volvo ary sns, ary eo anelanelan'ny 5kw-3000kw. Araka ny endrik'ireo andiana mpamorona hafa dia misy ireto karazana ireto: karazana misokatra, karazana mangina (misy canopy mangina), karazana fitoeran-javatra, karazana tranofiara.
Ny orinasa Walter dia any Yangzhou, faritanin'i Jiangsu, Sina. Ny faritry ny orinasa dia mihoatra ny 2500 metatra toradroa ary misy fitaovana mandroso ao anatin'izany ny milina fanapahana laser, milina famonoana cnc, milina niondrika cnc sns. Walter dia nanandrana teknisiana sy fotodrafitrasa tena tsara hanamafisana ny famokarana andiana generator voalohany.
Mba hiantohana ny kalitaon'ny entana, Walter dia nampiditra ny rafitra fitantanana lozisialy ERP ary nahazo mari-pahaizana momba ny kalitao ISO9001. Ny setran'ny generator rehetra dia nankatoavin'ny CE. Fitsapana vokatra mitambatra mahazatra, izay ahitsin'ny vokatra rehetra sy andrana alohan'ny handaozany ny ozinina, hahazoana antoka fa ny mpampiasa farany dia ho afa-po amin'ireo andiana mpamorona mandritra ny fotoana iasany.
Noho ny vokatra sy serivisy tsara azontsika, dia nitombo ny fahatokisan'ny mpanjifa anay. Walter dia nametraka fifandraisana fiaraha-miasa malalaka amin'ireo orinasa vahiny amin'ny filed maro, toy ny orinasam-pifandraisan-davitra avy any Nizeria, Peroa, Indonezia. Izahay dia manondrana mpamokatra herinaratra any Afrika, Afrika atsimo, Azia atsimo, Azia atsimo atsinanana.
Amin'ny ho avy, hanohy hanolotra entana avo lenta, serivisy tsara ho an'ny mpanjifanay izahay. Manome vokatra manara-penitra, manome serivisy pfofessional, manome silipo mora tohina sy mety, fenitra telo eo ho eo no tanjontsika mandritra ny fotoana maharitra. Azafady, minoa ahy, ny fisafidianana an'i Walter no safidinao hendry.